Mpanjono madinika: mangataka fari-dranomasina manokana | NewsMada
Mpanjono madinika: mangataka fari-dranomasina manokana
Nihaona tamin’ny minisitry ny Jono sy ny harena an-dranomasina, Andriamananoro Augustin, ny 19 jolay teo, ny solontenan’ny fikambanana ny Tambajotra Mihari* sy ny ONG Blue Ventures. Nanatrika ny fotoana koa ny masoivohon’i Angletera, i Sem.Phil Boyle, sy ny solontena avy amin’ny masoivohon’i Alemaina.
Ivondronan’ny mpanjono madinika mitantana fari-dranomasina (AMGL) ny tambajotra Mihari. Notaterin’ny filohany, i Emoantra Hermany, ny olana mianjady amin’izy ireo, ankehitriny. Anisan’izany ny fanjonoana mihoa-pampana any amin’ny fari-dranomasina anjonoan’ny mpanjono madinika, nefa idiran’ny vahiny mampiasa sambo mampiasa fitaovam-panjonoana toy ny harato madinika maso sady midadasika. Manodidina ny 500.000 anefa ny mpanjono madinika eto amintsika.
Hampitsahatra ny fampiasana lay
Mangataka ny hamaritana fari-dranomasina manokana ho an’ny mpanjono madinika mba hampifandanja ny jono madinika sy ny vaventy ny filohan’ny Mihari. “Ahafahanay miaina am-pahatoniana manoloana ny sambo indostrialy izany, hampitsahatra ny fahasimban’ny tontolo an-dranomasina eto Madagasikara ary hisian’ny fitantanana maharitra ny harena an-dranomasina”, hoy ihany izy.
Etsy ankilany, nanome toky ny tambajotra Mihari fa hiara-hiasa amin’ny mponina eny ifotony, hanentana azy ireo hampitsahatra ny fomba fanao tsy mety, toy ny fanjonoana amin’ny lay miaro amin’ny moka.
Efa nangataka ity famaritana fari-dranomasina manokana ho an’ny mpanjono madinika ity ny Tambajotra Mihari, ny volana jolay 2017 tany Taolagnaro, saingy tsy mbola notanterahin’ny fanjakana. Manohana ny fanatanterahana azy izy ireo, ankehitriny, tohanan’ny masoivohon’i Angletera sy i Alemaina.
Mpanjono madinika ny 72%
Nanome toky ny minisitry ny Jono sy ny harena an-dranomasina, Andriamananoro Augustin, fa hanohana ny famoahana didy hitsivolana roa ato anatin’ny herinandro vitsy hanatanterahana izany. Hamaritra ny fitsipika mifehy ny fari-dranomasina ny voalohany, ary hananganana vaomiera iombonana hanao ny famaritana ny faritra ny faharoa. Nilaza ny minisitra fa tanjona ny hisian’ny fepetra sy fitsipika mahomby, mifandanja isaky ny fari-dranomasina, miantraika any amin’ny sosialy, ny toekarena ary ny tontolo iainana. Ilaina kosa anefa ny fiaraha-midinika mazava sy matotra eo amin’ny mpanjono madinika sy ny indostrialy.
Araka ny fanadihadiana, ny taona 2012, avy amin’ny fomba nentin-drazana ny 72%-n’ny hazandrano nojonoina eto Madagasikara. Olana ny tsy fisian’ny lalàna manome zo ny mpanjono madinika hanjono any amin’ny morontsiraka. Na ny fari-dranomasina AMGL, tantanin’ny mponina eny ifotony aza, tsy misy lalàna miaro azy.
Nitsotra ny mpandrindra nasionaly ny tambajotra Mihari, Rtoa Rakotondrazafy Vatosoa, fa “zava-baovao tamin’ity taona ity izao fanapahan-kevitry ny minisitry ny Jono izao. Hotaterinay any ifotony izany mba hanome aina vao ny hoavin’ny mpanjono madinika eto Madagasikara”.